MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: 05 April 2009
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 8.4.090COMMENTS
Invitation for commemoration of the Sayadaw U Kovida
84-32, Apt#2A,GRAND AVE,ELMHURST NY 11373, U.S.A. Tel & Fx: (718) 426-3959
Venerable U Kovida, founder of the International Burmese Monks Organization (IBMO), has passed away on April 29, 2008. Sayadaw U Kovida is well-known Buddhist scholar monk, not only in lecturing hundreds of monks forahalf century in Mandalay but also in safeguarding Buddhism, which itself is at stake in Burma.
Sayadaw had indeed doneagreat service to the cause of the monastic life reminds us to perform extraordinary acts of compassionate service committing to the suffering humanity. Spirit and courage of Sayadaw U Kovida inspired us to follow his footsteps for future worthy of our pledge and sacrifice to accomplish his long desired mission we are in, to bind up nation's demand, to make the promise of Sayadaw come true.
Sayadaw leftalegacy behind meaningfully---will be living memory in the heart of the Burmese monks and followers around the world. We cordially invite you all to join us in honor of his illustrious life of an anniversary of the commemoration ceremony to be held by the International Burmese Monks Organization (IBMO) with the following program.
Offering food to the Sangha and lunch followed by the devotees 11: 00 am
Prayer to the Buddha 1 : 00 pm
Five precepts 1 : 10 pm
Speeches in memory of late Sayadaw U Kovida2: 10 pm
Dhamma talks2: 40 pm
Blessings & sharing merits for all beings3: 00 pm
Date: April 26, 2009 Sunday
Time: 9: am To 4: pm
Place: 84-32 Apt -2A Grand Ave, Elmhurst NY 11373
Train No: R-G-V Grand Ave, New Town Station
Contact: IBMO Office Tell: (718 ) 426 3959
Ashin Cando bhasacara
Cell (716) 512 2801
သာသနာ့ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များ အဖွဲ့ချုပ်
သာသနာ့ဥသျှောင် ညီမူရာခန်းမ ၁ နှစ်ပြည့်မင်္ဂလာအခမ်းအနား နှင့်
နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ဆုတောင်းပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
သာသနာ့ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့ချုပ်၏ ပဓာနာစေရ မစိုးရိမ် ဆရာတော်ကြီးသည် ၂၀၀ဂ-ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၇) ရက်နေ့ နေလယ်(၂)နာရီအချိန်တွင် သာသနာ့ဥသျှောင် ညီမူရာခန်းမကို ဖွင့်လှစ်ပေးတော်မူခဲ့၍ သာသနာ့ဥသျှောင် ပဋ္ဌာန်းဝတ်ရွတ် အသင်းကိုလည်း တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းပေးတော်မူခဲ့ပါသည်၊၊
ယင်းသို့ ဖွင့်လှစ်တည်ထောင်ပေး တော်မှုခဲ့ပြီးနောက် ၂- ရက်မြောက်ဖြစ်သည့်၂၀၀ဂ-ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၉)ရက်နေ့လယ် (၁) နာရီ (၇)မိနစ် အချိန်တွင် ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်ဖြစ်ရာ ယခုအခါ တနှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။
ဆရာတော်ကြီး၏ သီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်၊ ပညာဂုဏ်တို့သည် သာသနာ့သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် မမေ့နိုင်စရာပင် ဖြစ်ပါသည်။ သာသနာတော်ကို ထိပါးလာလျှင် ကိုယ့်အသက်ကိုပင်မငဲ့ဘဲ သာသနာ့အန္တရာယ် ကာကွယ်နိုင်ရန် သာသနာ့ဥသျှောင်ဟူသည့် အမည်ကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တော်မူ၍ ပီနန်ဆရာတော်ကြီးနှင့်အတူ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုကာ တည်ထောင်ပေးသွားခဲ့ပါသည်၊၊
ဆရာတော်ကြီး ဘ၀နတ်ထံပျံလွန်းခြင်းသည် သာသနာတော်နှင့် တိုင်းပြည်အတွက် ကြီးမားသော ဆုံးရှူံးမှုဖြစ်ပါသည်။ သို့အတွက် ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် တပည့်သံဃာတော်များနှင့် ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများအားလုံးက ဆရာတော်ကြီးအား ဂုဏ်ပြုပူဇော်သောအားဖြင့် နှစ်သစ်ကူးသည့် ယခုချိန်တွင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးအတွက် နှစ်လည် ဆုတောင်း အမျှဝေခြင်းမင်္ဂလာ၊ ဆရာတော် ဖွင့်လှစ်တည်ထောင်ခဲ့သော သာသနာ့ဥသျှောင် ညီမူရာခန်းမ ဖွင့်ပွဲ ၁ နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာ၊ ဆရာတော်ကြီးနှင့်အတူ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေး ခဲ့သော ရဟန်း၊ရှင်၊လူ၊ ကျောင်းသား ပြည်သူများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ ဘေးဒုက္ခအပေါင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် နှစ်သစ်ကူး ဆုတောင်းပွဲမင်္ဂလာတို့ ကို စုပေါင်း၍ တစ်ပြိုင်တည်း ပြုလုပ်ပါမည်၊၊
ထို့ကြောင့် ဆရာတော်ကြီး၏ တပည့် သံဃာတော်များ, ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများ, မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများအားလုံး, မြန်မာပြည် ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှ လွတ်မြောက်ရန် လုပ်ဆောင်နေကြသော အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနှင့် တိုင်းရင်းသား ညီကိုမောင်နှမများ အားလုံးတို့အား အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကြွရောက်ပါဝင် ကုသိုလ်ပွားများကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်၊၊
နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ဆုတောင်းပွဲ အစီအစဉ်
နေ့ရက် ဧပြီလ ၂၆ တနင်္ဂနွေနေ့ (April 26, Sunday)
အချိန် နံနက် ၉ နာရီ- ညနေ ၄ နာရီ
နေရာ 84-32, Grand Avenue Apt 2A, Elmhurst, NY 11373
စီးရမည့် ရထား R-G-V, Grand Ave New Town Station
ဆက်သွယ်ရန် ဆရာတော် ဦးဝိလာသ ( 917- 686- 1728) ဦးနာယက (347- 665- 5323)
ဦးအဂ္ဂဓမ္မ (336- 307- 9542) ဦးဣန္ဒာစာရ (718- 426- 3959) ဦးခေမိန္ဒ (516- 312 – 1720) မောင်မိုးထွေး (917- 617- 7595)
ကျွေးမွေးဧည့်ခံ ၁။ ကိုစုတ်ဖွား မ၀င်းမာ မိသားစု မုန့်ဟင်းခါး
၂။ ကိုမြင့်အောင် မရီရီမော် မိသားစု ကြက်သားအာလူး၊ ပဲညွန့်သုပ်
၃။ ဦးစွမ်းရည် ဒေါ်ခင်နွဲ့ကြည် ၀က်သား၊ ငါး၊ ငှက်ပျောပေါင်း
၄။ ကိုဇော်လတ် ၀က်သားနှပ်
၅။ ဒေါ်သင်းသင်းမော် မိသားစု ပုဇွန်ချဉ်သုပ်၊ ပဲဟင်းချို
၆။ မဥမ္မာ အအေး
၇။ ကိုငွေရှိန် မမြတ်မြတ်ယု ငါးပိသုပ်၊ တို့စရာ
၈။ ကိုနေ မစန္ဒီဝင်း ဒိန်ချဉ်
၉။ ကိုစိုးပိုင် မယဉ်နွယ်ချော မိသားစု ပုဇွန်ဟင်း၊ Bounty, Paper Napkins, Envelopes
၁၀။ ဒေါ်နွယ်နွယ်အေး မိသားစု ခရမ်းချဉ်သီး ငါးခြောက်နှပ်
**** မှတ်ချက် ဆက်လက်ထွက်ပေါ်လာမည့် အလှူရှင်များကို ထပ်မံ ဖေါ်ပြပါမည်။ လှူဒါန်းလိုသည့်
ကုသိုလ်ရှင်များ သာသနာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
သာသနာ့ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များ အဖွဲ့ချုပ်။
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 6.4.090COMMENTS
THE 3rd ANNUAL MIGHTY MIC HUMAN RIGHTS AWARENESS C...